Uthotho lwe-galaxy inqaku lama-20: izinto ezincinci esizilahlileyo kwaye safumana
Eyona Iindaba Kunye Nokuphononongwa Uchungechunge lweGalaxy Note 20: Iimpawu ezincinci esilahlekileyo kwaye safumana
Okuzayo Qaphela i-20 Ultra ifumana amanqaku amatsha amangalisayo , ezinje ngesikhulisi samandla se5G kunye ne-DeX engenazingcingo. Nangona kunjalo, asinakho ukungahoyi izinto ezincinci esasikade sizithatha kancinci kwaye ngoku asibikho kwii-smartphones eziphambili, ezinje ngephonephone jack. Ke kweli nqaku, siza kuphendula imibuzo enxulumene nenqaku onokuthi uzibuze malunga neNqaku 20.
Tsibela ngqo ku:
Ngaba i-Galaxy Qaphela i-20 inayo i-headphone jack?
Ngaba i-Galaxy Note 20 inememori eyandisiweyo?
Ngaba i-Galaxy Note 20 inokutshaja ngaphandle kwamacingo?
Ngaba i-Galaxy Note 20 ayinamanzi?
Ngaba i-Galaxy Qaphela i-20 ezimbini ze-SIM?
Ngaba i-Galaxy Note 20 iyayixhasa i-5G?
Iphuma nini i-Galaxy Note 20?
Isamsung yazisa ngeGlass Buds Live yeendlebe ezingenazingcingo ngokwenyani ecaleni kweNqaku 20
Kungcono okanye kubi, Isamsung iphakathi kwabenzi be-smartphone abanomdla wokusityhalela kwikamva elingenazingcingo, oko kuyaqondakala kwezi ntsuku. Kulindeleke ukuba nazo nazo, ngakumbi xa ucinga ukuba IGlobal Buds Ebukhoma yabhengezwa ecaleni kweGalaxy Note 20. Uyazi ukuba kuthetha ntoni oku ...
NjengeNqaku 10, ifayile ye- I-Samsung Galaxy Qaphela i-20 ayinayo i-headphone ye-3.5mm, kwaye ayinayo i-Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ukuze usebenzise ii-headphone ezinentambo kunye nefowuni yakho entsha, kuya kufuneka uthenge i-dongle eyahlukileyo.
Ewe kunjalo, eyona nto ifunwa yiSamsung kukuzifumanela iperi yeeGlobal Buds ezingenazingcingo. Ngayiphi na imeko, njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukungabinayo i-headphone jack kwifowuni yeflegi ayothusi, kwaye asinakusiphosisa isigebenga saseKorea ngokuhambelana neendlela zeshishini.
I-Samsung Galaxy Note 20 ngoku iza ne-128GB yokugcina ngaphakathi, engenakwandiswa. Iindaba ezimnandi zezokuba i-128GB kufuneka yanele uninzi lwabantu. Unokufumana eli nqaku lilandelayo liluncedo ukuba wena & apos uyazibuza ngokwakho: 'Ngaba i-128GB indanele?'
Kodwa ukuba wena & apos; unomdla wokuba ngaba umxhasi weGlass Qaphela 20 Ultra unendawo yekhadi le-SD-ayenzi! Ungayandisa i-Galaxy Qaphela 20 ye-Ultra kunye ne-apos; yokugcina nge-microSDXC (ukuya kuthi ga kwi-1000GB). I-Ultra ikwahluka okuza ne-512GB yogcino lwangaphakathi, ukongeza kwisiseko sayo se-128GB ukhetho.
Iimodeli zeGalaxy Note 20 ziya kuxhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo, kakhulu njengeGPS S20 Plus eboniswe apha
Ewe, zombini i-Galaxy Qaphela i-20 kunye ne-Galaxy Note 20 Ultra zinokutshaja ngaphandle kwamacingo kwaye zibuyisa umva inkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ukuguqula ukutshaja ngaphandle kwamacingo kuthetha ukuba ukuba, umzekelo, ungumnini weGlobal Buds Live okanye I-Samsung Galaxy Watch 3 , ungabiza isixhobo ngokuthe ngqo kwiGalaxy Note 20 yakho ngaphandle kwamacingo.
I-Galaxy Note 20 kunye ne-Galaxy Note 20 Ultra zombini zinamanzi kunye nothuli, kwaye zithwala i-IP68. Ngokuka-Samsung, oku kuthetha ukuba iNqaku lama-20 likhuselekile kwi-splashes, drip, ukuya kuthi ga kwi-1.5 yeemitha zamanzi malunga nemizuzu engama-30. Ukuyisebenzisa elunxwemeni okanye kumachibi ajikelezileyo akucetyiswa, nangona kunjalo, njengoko umlinganiso we-IP68 ubandakanya ukuvavanywa kwamanzi amatsha kuphela.
Isamsung ithi i-Galaxy Qaphela i-20 kunye ne-20 ye-Ultra iya kuba nazo zombini ii-SIM kunye neemodeli ezimbini ze-SIM. Ukufumaneka kweemodeli ezimbini zeSIM kuyahluka phakathi kwamazwe kunye nabathwali.
Ithetha ukuthini i-SIM kukuba i-smartphone inokusebenzisa ngaxeshanye ii-SIM khadi ezimbini. Oku kuluncedo ngakumbi kubasebenzisi beshishini abanokuba ne-SIM khadi eyahlukileyo (kwaye yiyo-inombolo yefowuni) yomsebenzi, ukongeza kweyabo yobuqu.
Ewe, zombini ezi zinto zahlukileyo zeNqaku 20- iGlass Qaphela 20 kunye neGalaxy Note 20 Ultra zilungile i-5G. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, bona kunye neapos; baphinde babe ngabokuqala kwimidlalo yemodyuli yokukhulisa amandla ye5G yiQualcomm. Isikhulisi senzelwe i-5G kunye ne-4G-band-low-band-grabbing, iqinisekisa ukuba iNqaku lama-20 liya kuba nakho ukungabinakho kwikamva kuthungelwano lwehlabathi kunakwiphinda-phindo lwangaphambili.
IGreen Note 20 iyafumaneka kulandelwa kwangaphambili ngoku, ngelixa ukuhambisa kuqala nge-21 ka-Agasti.
Ukujonga ukuyithenga? Unokuba nomdla wokujonga Eyona nto ibalulekileyo kwiGlass Qaphela 20 kunye noku-odola kwangaphambili izipho eVerizon, T-Mobile, AT & T nakwi-Best Buy. Ukongeza, ungalibali ukukhusela iflegi yakho ebizayo ngokukhetha ityala kuluhlu lwethu lwe Eyona nto ibaluleke kakhulu kwiGalaxy Note 20 .
Thenga i-Galaxy Note 20 kwi-Samsung.com
t mobile ekuthengeni ngcono
Ezona ntloko zintambo zingenazingcingo onokuzithenga ngo-2020
I-Samsung Pay kwiGear S3 ayisebenzi neGoogle Pixel
Ungayidlala njani iFacebook Messenger & iiapos zemidlalo ekhawulezileyo kwi-Android yakho okanye kwi-iPhone
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy NotePRO 12.2
Ulandela njani uhlaziyo losetyenziso lwe-Android ongakhange ulufumane kwivenkile yeGoogle Play